August 22, 2020 – Xorriya Online
Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabiley wakiilka cusub ee Itoobiya u soo magacaabay Somaliland ‘sawirro’
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley wakiilka cusub ee dawladda Federal-ka Itoobiya dhawaan u soo magacowday Somaliland, Amb Siciid Maxamed Jibriil. Kulankan madaxweynuhu ku qaabiley wakiilka, ayaa ujeedkiisu ahaa soo dhawayn, madaama uu wakiilka yahay qof cusub oo dhawaan dawladda federal-ka Itoobiya u soo magacawday Somaliland. Kulankan, ayaa sidoo kale lagu […]
War murtiyeed ay wadajir u soo saareen Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay ku caddeeyeen in aanay qeyb ka aheyn laguna matalin Shirka ka dhacay Dhuusamareeb, kaasoo xalay War murtiyeed ku saabsan hannaanka doorashada laga soo saaray. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa hoosta ka xariiqay inuu dhacay qalalaase siyaasadeed intii u dhaxeysay Dhuusamareeb 2 iyo 3, arrintaas […]
Sheekada jaajuusaddii reer Masar Hibo Saliim ee sirdoonka Israa’iil dalkeeda u adeegsadeen qeybta 1aad
Magaca Hiba Saliim markaad maqasho waxaa durba kugu soo dhacaayo mid kamid ah jaasuusiintii ugu halista badnaa uguna dhagarta badnaa ee Mossadka ku guuleysteen iney askareeyaan kadibna danahooda ugu adeegto. Waxay aheyd gabar masaari ah balse dhagarta yahuuda iyo siriqdooda ku dhacday ayadoona markii dambe bilowday qorshe ay ugu adeegeyso danaha Yahuuda kuwaasoo halis galiyay […]
Sacuudiga oo ka hadlay mowqifkooda heshiiska UAE iyo Israel iyo hadey Israel heshiis la gali doonaan
Boqortooyada Sacuudi Carabi ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay mowqifkeeda ku aadan heshiiskii Imaaraatka iyo Israel iyo hadii ay dhankooda Israel heshiis la gali doonaan. Wasiirka Arimaha dibada Sacuudiga ee Amiir Feysal bin Farhan Ala-Sacuud ayaana sheegay ineysan Imaaraatka ku raacsaneen heshiiskii ay Israel la galeen dhankoodana heshiis ceynkaas ah Yahuuda la gali doonin. Wasiirka […]
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kadib markii uu ka qeyb galay heshiiskii Shirkii Dhuusomareeb 3 inkastoo ay ka maqnaayeen maamulada Jubbaland iyo Puntland. Gudoomiye Cumar Filish ayayna soo laabashadiisa kusoo aaday sanad guuradii koowaad ee maalintii xilkaan loo magacabay. Gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka Aadan Cade […]
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Guuleed ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan shirkii Dhuusomareeb ee laga soo saaray go’aanka doorashada cusub ee 2021da asigoona soo dhaweeyay. Qoraal uusoo dhigay bartiisa Facebooga ayuuna sidaan kusoo qoray; Waxaan soo dhoweynaya qodobbada heshiiska Dhuusamareeb3 oo dalka u jiheynaya doorasho la jaan qaadi karta waqtiga dhiman iyo duruufaha jira. […]
Xisbiga Wadajir Party oo war kasoo saaray Shirkii Dhuusomareeb 3
Xisibiga Wadajir Party oo uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay mowqufkooda ku aadan shirkii Samareeb 3 ayagoona sheegay inuu yahay mid qabyo ah. Xisbiga ayaa sheegay in shirka ka maqnaayeen labo dowlad goboleed oo saamileyda siyaasada ka tirsan loona baahanyahay in heshiiska lagu soo daro ayagoona sidoo kale heshiiska u arkay inuu gogol […]